မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Quanzhou New Hunter Bags & Luggages Co. , Ltd.
ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှောင်လိုင်းများရှိသည့်စက်ရုံဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကုန်သွယ်ရေးဌာနလည်းရှိသည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များကိုနားလည်မှုလွဲခြင်းမရှိဘဲတိုက်ရိုက်ထိထိရောက်ရောက်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
အကယ်၍ နမူနာသည်သင်၏ဒီဇိုင်းစသည်ဖြင့် အခြေခံ၍ တည်ဆောက်သင့်သည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်စသည်ဖြင့်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့စက်ရုံ၌ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သောထိုပစ္စည်းများသာလျှင်ပုံမှန်အားဖြင့်အခမဲ့ဖြစ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ပစ္စည်းသည်အထူးဖြစ်ပြီးအကုန်အကျခံလျှင်ဤကိစ္စတွင်နမူနာအခကြေးငွေများကိုမည်သို့မည်ပုံဖြေရှင်းမည်ကိုသင်နှင့်သင်ဆွေးနွေးလိမ့်မည်။
နမူနာများအတွက် ဦး ဆောင်အချိန်ကိုကဘာလဲ?
ပုံမှန်အားဖြင့် ၇-၁၀ ရက်သည်သင်ထားသည့်ပုံစံပေါ်မူတည်သည်။
အိတ်တစ်မျိုးစီ၏အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးရန်သင်ဘာလုပ်သနည်း (နမူနာ / အမြောက်အများထုတ်လုပ်ရန်အတွက်) ။
က) နမူနာအတွက် - စာရွက်ပုံစံကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်း၊ * ဒီဇိုင်းနှင့်ကိုက်ညီရန်ထည် & ညှပ်ရှာဖွေ; * ချုပ်ချုပ်နည်းစနစ်များကိုစမ်းသပ်ခြင်း; * ဖောက်သည်များထံမပို့မီအခြားအရာများတိုးတက်ရန်လိုအပ်မလားဆိုတာအဖွဲ့နှင့်အတူနောက်ဆုံးနမူနာကိုစစ်ဆေးခြင်း။
* စစ်ဆေးခြင်းစံသတ်မှတ်ချက်ကိုအိတ်၏သိပ္ပံစွမ်းဆောင်ရည်သာမကဓာတုပစ္စည်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသာမကကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏စျေးကွက်များအပေါ် အခြေခံ၍ စစ်ဆေးခြင်း၊ နောက်ဆုံးအတည်ပြုခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အားအသိပေးခြင်း။
ခ) အမြောက်အများထုတ်လုပ်သည့်အမှာစာများအတွက် - နမူနာအဆင့်ရှိစစ်ဆင်ရေးကို အခြေခံ၍ အသေးစိတ်များနှင့်မေးခွန်းများကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဖောက်သည်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မှဖြေရှင်းပေးသည်။ အချိန်တိုအတွင်းအမြောက်အများထုတ်လုပ်မှုသေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်ကိုလိုက်နာပါမည်။ ထုတ်လုပ်မှုကာလအတွင်းဖြစ်ပွားမှုရှိပါက၎င်းတို့ကိုအတည်ပြုရန်သို့မဟုတ်ပြtheနာကိုကြိုတင်ဖြေရှင်းရန်အချိန်ရှိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားပါမည်။
ရာသီတစ်ခုစီအတွက်သင် catelogue ရှိပါသလား
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့မှာကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်နာရှိတယ်၊ ဒီဇိုင်းဆွဲပြီးဒီဇိုင်းဆွဲပြီးခေတ်မှီဆန်းသစ်တဲ့ဖက်ရှင်နဲ့အံ ၀ င်နိုင်အောင်အိတ်အမျိုးမျိုးကိုဒီဇိုင်းလုပ်တယ်။
တစ်နှစ်ဝက်အတွင်းကွဲပြားခြားနားသောအိတ်များနှင့်အတူ Catelogue! သင်သည်ငါတို့ e-catelogue လိုအပ်မယ်ဆိုရင် pls ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
မင်းရဲ့ MOQ ကိုမရောက်နိုင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
သင်၏ရည်ညွှန်းချက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုရန်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။ သင်မည်သည့်အရာဖြစ်ပျက်နိုင်သင်အမိန့်အပေါ်ကိုရွှေ့ဖို့အများကြီးကူညီထင်ထင်လမ်းကိုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် - ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ MOQ နှင့်မတွေ့ဆုံနိုင်သည့်အကြောင်းအရင်းမှာသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းရှိပြီးသင်နှင့်ထည်နှင့်ချုံ့စာရွက်များကိုဘွတ်ကင်လုပ်ရန် MOQ သို့မရောက်ရှိနိုင်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အလားတူထည်သို့မဟုတ်ချည်မျှင်များကိုကြည့်ရန်အကြံပြုလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်၏အရည်အချင်းသည်အပိုင်းအစ ၃၀ မှ ၅၀ အထိသာဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏စတော့ရှယ်ယာကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိမ့်မည်။ ၎င်းမှာအရည်အသွေးကောင်းသော်လည်းသင့်တင့်သောစျေးနှုန်းနှင့်ရာသီအလိုက်ဖက်ရှင်အသွင်ရှိသည်။ သင့်အီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိပါကနောက်ပိုင်းတွင်သင့်အားမေးခွန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သောမန်နေဂျာကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိမည်။
ဟုတ်ပါသည်၊ နှစ်စဉ်ကျွန်ုပ်တို့ကွဲပြားခြားနားသောအိတ်များအမျိုးအစားများကိုတီထွင်သည်။ လူကြီးမင်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိတ်ဒီဇိုင်းကိုရွေးချယ်ကြသော်လည်းသူတို့၏လိုဂိုကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အပ်ငွေကို T / T ။ D / P D / A အနောက်တိုင်းယူနီယံငွေပေးချေမှုဒါဟာဆွေးနွေးချက်ဖြစ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ရှိပြီးသင့်အားဆက်သွယ်မှုပြုရန်ကျွမ်းကျင်သောနည်းပညာကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ရှိသည်။ သင့်အရောင်းအ ၀ ယ်စာရင်းအင်းများကိုစုဆောင်းသည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်တွင်မည်သည့်ကဏ္aspectsများအားဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်နေရကြောင်းနှင့်မည်သည့်အသွင်အပြင်ကိုလိုအပ်နေသေးသည်ကိုပိုမိုနားလည်နိုင်သည်။ တိုးတက်လာသည် သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်ပြီးပါကအရောင်းအ ၀ ယ်ပြီးနောက်အန္တရာယ်မရှိတော့ပါ။